Netflix waxay Wadaagtaa Waxyaabaha Qariibka ah Xilliga 4 Teaser, Waxay Xaqiijineysaa Siideynta 2022 - Dhaqanka Pop
Netflix waxay Wadaagtaa Waxyaabaha Qariibka ah Xilliga 4 Teaser, Waxay Xaqiijineysaa Siideynta 2022
Fiidiyowga ka fog
Muddo aan dheerayn kadib markii agaasimaha-soo-saare Shawn Levy uu xaqiijiyay in taageerayaashu ay wax badan maqli doonaan Waxyaabaha Shisheeyaha Xilliga 4 goor dhow, Netflix waxay soo bandhigaysaa teaser cusub.
Iyaga oo soo bandhigaya iftiimin kooban oo xilli-ciyaareedka cusub ah, oo ay ka mid yihiin fiirinta Eleven-ka xannibay iyo Jim Hopper oo qalabeysan olole, teaser-ka ayaa sidoo kale la socda xaqiijinta in xilli-ciyaareedka cusubi imaan doono sannadka dambe. Waxay sugaysay muddo dheer taageerayaasha, iyadoo xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay uu ka dooday 2019, laakiin qof kasta oo ku lug lahaa ayaa ballanqaaday inay u qalanto farqiga dheer ee u dhexeeya xilliyada.
In kasta oo qaar ka mid ah dib-u-dhacyada loo aanayn karo masiibada COVID-19, oo xirtay TV-ga iyo soo-saarista filimada inta badan 2020, agaasimaha iyo soo-saaraha fulinta Shawn Levy ayaa dhowaan si maldahan u sheegay in qayb ka mid ah sababaha sugitaanka dheer ay sabab u tahay sida hamiga leh ee bandhiggu ayaa helay. 'Waxaan ku toogtay Lithuania isla markiiba ka hor masiibada. Waxaan ku duubnay Georgia, Lithuania iyo New Mexico, marka waa ku filan tahay in la yiraahdo Xilliga 4aad waa fidsan yahay, Shawn Levy ayaa u sheegay Noocyada kala duwan bishii hore. Aragti ahaan iyo sheeko ahaan aad iyo aad bay u han weyn tahay, aad bayna uga hami badan tahay saddexdii xilli ee hore.
ciyaarta of carshiga xilli 7 durdur reddit
Teaser -ku wax badan ma bixiyo ilaa inta goobo cusub ay tagaan, laakiin taageerayaashu waxay durba si fiican u ogyihiin in David Harbors Jim Hopper markii ugu dambaysay lagu arkay Ruushka. Looma baahna in la yiraahdo, waxaa jiri doona goobo badan oo dheeraad ah markan, iyo weliba qadar kale oo caafimaad leh oo ah moodada 80-tastic, sidoo kale.
Kor ka daawo teaser -ka cusub.
ugu 3 tilmaame ee ciyaarta nba
waxa imanaya ka dib kubbadda masduulaagii z
ma magacaabi kartaa 100 -ka ciyaartoy ee ugu sarreeya
imisa jir buu ahaa chris tucker jimcihii